Fantatrao, firenena rehetra uniqiue. Firenena rehetra no hahazo lisitry ny antony, Nahoana no nifidy azy. Ary eto ny lisitry ny antony ho an'i Okraina. Fantatrao ny antony fianarana any Ukraine izao.
Okrainiana anjerimanontolo tena manana kalitao avo fanabeazana. Be dia be ny unviersities manana taranja amin'ny teny anglisy na fiomanana ho an'ny fianarana sekoly ambony na Okrainiana fiteny Rosiana.
Fantatra eran-Courses (Eoropa, UK, USA, Asia, Africa, WHO, UNESCO, EOROPEANINA Filan-kevitry ny, etc.)
Okrainiana oniversite manana izany rehetra izany dia manaiky. Ny diplaoma, dia ho tsara na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Mari-pahaizana ara-pitsaboana eken'ny WHO, UNESCO, vavony (UK), USMLE (USA), manerana Vondrona Eoropeana sy ny fikambanana iraisam-pirenena Various
Medical antokony no malaza indrindra ao amin'ny Ukraing teo vahiny mpianatra. Afaka mianatra easly MBBS any Ukraine, satria dia ho ekena na aiza na aiza ao amin'ny Tontolo Izao.
Ity teny ireo ho an'ny lehibe scarry isan'ny mpianatra iraisam-pirenena. Izy ireo dia midika fanampiny karama sy mafy fieken-keloka. Fa mora any Ukraine. Tsy mila manao na dia iray akory fanadinana ity.
Tsy mitombo fanadinana, HANY taratasy ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa Bachelor ny Programmes
Re toy ny rambony, fa marina izany. Tena mora ny fieken-keloka.
Saram-pianarana aloa amin'ny saran'ny tonga
Be dia be ny mpianatra tsy te-handoa alohan'ny fahatongavany. Eto dia afaka manao izany. antoka, tsy maintsy handoavana ny taratasy fanasana sy ny asa ao amin'ny sampan-draharaha raha toa ka mampiasa izany, fa ihany, saika rehetra mandoa vola ianao raha tsy aorian'ny tonga any Ukraine. Ny vola azo antoka.
Cost mahomby (levitra Eoropeana fanabeazana)
Mitady eoropeanina fanabeazana amin'ny ambany indrindra ny saram-pianarana? Indro Ilay izy. Ukraine no tena mora ny fanabeazana
Eoropa Life Standard
Ukraine toerana eo afovoany sy ny atsinanan'i Eoropa. Io no lehibe indrindra firenena any Eoropa. Ity ny tena Eoropeana standarts ny fiainana miaraka amin'ny vidiny mirary.
Better Job fanantenana
Ukraine tsara toerana ho an'ny asa fanombohan'ny
Antonony Climate taona rehetra manodidina
Adinoy ny mahavariana mafana na mangatsiaka androm-piainany. Fotoana rehetra ny taona dia tsara tarehy any Ukraine
Karena ny Experience noho ny Visiting Profesora avy any USA, KANADA, UK, sns.
Lehibe maro ny oniversite dia manana fiaraha-miasa amin'ny Etazonia, Kanada sy Eoropa unviersities. Izany dia ny fahafahana hihaona eran-tany malaza proffessors any Ukraine amin'ny saram-pianarana ambany indrindra saran'ny.
Vintana ny maharitra Residence & Ponenana tany Eoropa, rehefa vita ny fianarana fandaharana
Marina izany. Aoka ianao ho tsara mpianatra ka ianao hahazo fahafahana hahazo-ponenana tany Eoropa firenena.
100% VISA tapaka ho mendrika kandidà
One more miampy – ianao 100% mahazo VISA raha mianatra amin'ny anjerimanontolo Okrainiana.
Rehefa isika rehetra te-hilaza fotsiny, fa Okraina dia tena mahagaga goavana firenena maro ny fahaiza-manao ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena. Halalino any Ukraine sy ianao raiki-pitia aminy. Tsidiho ny Ukraine ary ianao tsy mila fanontaniana “Nahoana no mianatra any Ukraine?”
Top fitsaboana anjerimanontolo any Ukraine 2017